Tababarihii Hore Ee Xidiga Erling Braut Haaland Oo Sheegay Horyaalka Uu Jecelyahay
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Tababarihii hore ee Xidiga Erling Braut Haaland oo sheegay Horyaalka uu jecelyahay
Tababarihii hore ee xidiga Erling Braut Haaland Gunnar Halle ayaa aaminsan in isku xirnaanta weeraryahankan ee England iyo aabihiis ay saameyn ku yeelan karto mustaqbalkiisa ciyaareed ee soo socda.
Haaland waa mid ka mid ah ciyaartoyda loogu doon doonista badan yahay kubada cagta adduunka ka dib qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa ee Borussia Dortmund , iyadoo Manchester United , Manchester City iyo Chelsea dhamaantood loo maleynayo inay u tartamayaan saxiixiisa.
Weeraryahanka aabihiis Alf-Inge Haaland ayaa 10 sano ku qaatay kubada cagta Ingariiska intii u dhaxeysay 1993 iyo 2003, Erling Haaland laftiisuna wuxuu ku dhashay Leeds, sidaa darteed Halle wuxuu ku qanacsan yahay in xoogaa qalbigiisa uu ku jiro kubada cagta Ingariiska iyadoo si weyn loo hadal hayo mustaqbalkiisa.
Isaga oo la hadlaya Daily Star , Halle ayaa yidhi: “Way adag tahay in la yidhaahdo xiisaha Isbaanishka iyo Ingiriisiga waxa jira waxyaabo badan oo hadda ay tahay in laga fiirsado.
“Laakiin dabcan waxaan u maleynayaa in wax yar oo qalbigiisa ka mid ah uu baaqi ku yahay England maxaa yeelay aabihiis ayaa halkaas kula ciyaarayay Leeds iyo City laakiin sidoo kale wuxuu xiriir la lahaa Ole Gunnar Solskjaer sidaa darteed waxaan u maleynayaa in aabihiis laga yaabo inuu qeyb ka ciyaaro.
“Erling wuxuu ka fikiri doonaa halka uu guulo badan kaga heli karo sida uu u ciyaarayo ee ma ahan lacagta, wuxuu heli doonaa lacag aad u badan meel kasta.
Haaland aabihiis iyo wakiilkiisa Mino Raiola ayaa durbaba wadahadalo hordhac ah la yeeshay Real Madrid iyo Barcelona oo ku saabsan Haaland, kaasoo dhaliyay 33 gool 33 kulan oo tartamada oo dhan ah xilli ciyaareedkan.
Previous articleMarcos Rojo ayaa ku boorinaya Edinson Cavani inuu ka tago Man United kuna biiro kooxda Boca Juniors
Next articleManchester United oo qorsheyneysa heshiis isdhaafsi oo ku saabsan Lingard iyo Rice